Ikhonkrithi Vibrator, eziphathekayo Trowel oomatshini, eziphathekayo mgawuli-ACE OOMATSHINI
Kudala siguqula izimvo zibe ziiprojekthi eziwonga amabhaso.
Oomatshini be-Ningbo ACE njengomboneleli wesisombululo sokwakha oomatshini abanamava eminyaka engama-25 .Ngemveliso ephambili: I-vibrator ephathekayo, i-poker shaft, i-Plate compactor, i-Tamping rammer, i-Power trowel, i-Concrete mixer, i-concrete cutter, i-steel bar cutter, i-bar bar bender kunye ne-mini excavator . Sineentengiso ezi-6 ezigqwesileyo zamanye amazwe, iinjineli ezi-2 ezineminyaka eli-15 yamava, abayili aba-4, i-3 QC kunye ne-1 QA, ukwenza iqela eliqinisekisiweyo, amagcisa anamava alawula ngononophelo izinto ezibalulekileyo ezibandakanyekayo kwinkqubo yophando lwemveliso nophuhliso. jonga ngakumbi
I-330kg kunye ne-compact compact plate eguqukayo
I-270kg kunye ne-compact compact plate eguqulwayo
I-160kg ene-30.5kn icompactor eguqukayo yeplate
I-125kg ene-25.0kn icompactor eguqukayo yeplate
I-80kgs ene-15.0kn Plate Compactor enetanki lamanzi
I-120kgs yeKhonkrithi yeDiskeli yeDiskeli yeDiskeli yeCompactor
I-90kgs enexabiso leCompactor eyi-15.0kn
Ii-77kgs ezine-13.5kn Honda Plate Compactor
65kgs ezinamandla 10.5kn amandla eshukuma iPactactor
Umatshini wokumakisha wendlela obandayo
Oomatshini be-ACE bebejolise kuphuhliso lwee-roller eziphezulu ze-hydraulic. Emva kwamashumi eminyaka ophuhliso, ngoku sinegubu elinye; Igubu-mbini kunye nokuhamba kwi-roller vibration.
** Inkqubo okanye i-American White Hydraulic system kunye ne-Hydraulic pump
I-ACE Ribration roller yenzelwe ukuba isetyenziswe ngokubanzi kuzo zonke iintlobo zokwakhiwa kweziseko zophuhliso kunye nokugcinwa, sisixhobo sokwakha esibalulekileyo sokulungiswa kwendlela, ukulungiswa komsebenzi, indawo encinci kunye nokuxinana komjelo.
I-ACE Mini Excavator yenzelwe ubungakanani obuncinci kwaye obugcweleyo kunye nomjikelo ojikelezayo .Imodeli yokuthengisa ephezulu: 1.0T-1.2T-1.6T kunye ne-2.0T. Isebenza ngezixhobo ezahlukeneyo, njenge: Ibhakethi, iAugger, iRake, Ripper, Wood Grab, Broken Hammer ... njl. ikakhulu zilungele imisebenzi emincinci, egadini, kwigadi yeziqhamo, umhlaba weefama, indawo eluhlaza yemifuno, ukubeka imibhobho, imisebenzi kamasipala kunye nolwakhiwo lwasezidolophini.
Iqhuba ngenjini ye-YAMAR, inengxolo ephantsi kunye nokusebenza kakuhle kwezoqoqosho, i-Japan Eton yokuhamba ngeemoto kunye neziko lokudibanisa, ukungenisa umbhobho we-hydraulic.
I-ACE Yokulayisha Umxhubi wekhonkrithi luhlobo loomatshini abasebenza ngokudibanisa ukudibanisa umxube wokuhamba, umxube wekhonkrithi kunye nomlayishi wamavili kunye.
Imodeli yokuthengisa ephezulu: 1.6m3-2.2m3-4.0m3 kunye ne-4.2m3
Inokulayisha ngokuzenzekelayo, ilinganise, idibanise kwaye ikhuphe umxube wekhonkrithi. Exhotyiswe ngamandla YUNNEI 60kw ~ 92kw Idizili injini kunye 4 ivili drive, self ukulayishwa Umxhubi eziphathekayo ifana nje ilori kunye nomqhubi uyakwazi ukuqhuba ukuya apho kufuneka ukuya. Kuyinto elula kakhulu ukulayisha izinto, ezinje ngesamente, ngokudibeneyo, ilitye.
I-Hitachi ZX690LCR-7 kunye noMatshini oPhezulu ...
30 Oktobha 20
Oko kuphuhliswa kwesicoci kunye nomatshini wolwakhiwo, kukho iimveliso ezininzi nangakumbi ezilungele imeko eyahlukileyo, kwaye nazi iindaba zamva malunga ...
21 Oktobha 20
I-R & D yaseFrance kunye neziko lokuvelisa lisandula ukugqiba umatshini omtsha -R940 Crawler Excavator eziyimveliso yakutshanje kuthotho lwe-R 944C Incedo kumava atyebileyo avela eLibherr, ne ...
Ngobulunga bemveliso njengeyona nto iphambili kuthi, siya kudala uphawu oluya kuluchaza ngokutsha ushishino.
Oomatshini be-ACE ngokudibanisa ngokupheleleyo amandla kunye ne-finesse ukukuzisela ogqwesileyo kumatshini wekhonkrithi kunye nokuxinana.